Yintoni enokulungiswa kwisitya sebhokhwe esele senziwe (esithengiweyo)? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Yintoni enokuphekwa kumhluzi olungiselelwe (othengwayo) wepuff yeast?
Unokwenza i-pie ye-wreath nge-bacon, amaqanda kunye noshizi. Kule nto siyifunayo: puff pastry 500 g, bacon 150 g, ushizi onobunzima 100 g, amaqanda abilisiweyo ama-2 ii-pcs. , ipepile emnyama, imifuno ebilisiwe, imbewu yesame.
Kuqala kufuneka ungabetheki inhlama kwaye uyiqengqele kancinci. Sika oonxantathu (iziqwenga ezi-8 okanye ngaphezulu).
Beka iphepha kwiphepha lokubhaka kwaye ubeke unxantathu kwisangqa, kufutshane kangangoko kunokwenzeka.
Bacon ecekeceke ngaphezulu kwehlama. Beka isiqingatha seshizi yentsimbi ngaphezulu kwibhakethi. Gquma amaqanda phezulu, emva koko ushizi oshiyekileyo.
Beka imiphetho ngaphakathi, ucinezele inqaku ngalinye ngononophelo.
Hambisa i-yolk ngobisi oluncinci kwaye uthambise i-pie ephezulu ye-pie: Phalaza imbewu yeesame ngaphezulu. Preheat ihovini ukuya kwi-180-190С kwaye ubhake malunga nemizuzu engama-25 ukuya kwengama-30 de ibe brown yegolide. Kulula kakhulu kwaye kulula, kwaye kubaluleke kakhulu, kumnandi.
Ipayi nenyama kunye nama-mushroom:
malunga ne-500 yegrem ye-puff yeast pain.
Gram 300 yenkukhu okanye inyama yenkomo.
Hlanganisa zonke izithako ngaphandle kovavanyo lwekhosi)))
Yahlula inhlama ibe ngamacandelo ama-2 alinganayo.
Roll yokuqala kwaye ubeke kwiphepha lokubhaka.
Phezulu nenyama enamaminerali kunye nama-mushroom.
Kwaye ugubungele ngolwesibini ungqengqelo lwenhlama.
Lubricate ungqimba oluphezulu kunye neqanda kunye nehovini malunga nemizuzu engama-30, kwiqondo lokushisa lama-degrees ayi-180. Jonga nje ikhekhe ngaphakathi ehovini, njengoko Inhlama inokuphakama, kuya kufuneka ihlatywe ngommese okanye ngemfoloko)
Iipies zinkulu, azifani. Ndiyithanda kakhulu ukuzaliswa kwe-salmon kunye ne-tarragon, i-cod okanye i-haddock fish. Ukwenza oku, vele uqengqele ungqimba kwiphepha lokubhaka ngokubanzi, usasaze ifilimu ibe iziqwenga, i-anyanisi enesiqingatha semikhonkwane (i-anyanisi engaphezulu), ityuwa, ipepile, ukuba intlanzi ebilayo, ungabeka iziqwenga ezimbalwa zebhotela uze ufefe ngepine yomgubo. Gquma ngomaleko wesibini, usongele imiphetho, ugrisi ngeqanda. Bhaka imizuzu engama-40-60. Ungayifaka intlanzi inkukhu, okanye inyama (kodwa kubonakala ngathi ayindim. I-pie yesibini iyintlanzi-intlanzi (umzekelo we-telapia) egxunyekwe nge-grinder yenyama ngomnatha omkhulu, yongeza i-anyanisi egayiweyo kwinyama enemigodi, amaqanda abilisiwe, dill etyunjiweyo. Ukubumba njengoko unqwenela. I-pizza kwi-puff pastry efana nentombi
2.Iibhombu. Iibhloko zam endizithandayo zenziwe zalula. Sikhupha umaleko we-puff pastry, igrisi ngepudding eyenziwe ngomatshini (ndithenge umxube owomileyo, ndenze ubisi) okanye i-custard, ndiyigalele ngeziqhamo ezomileyo kunye namandongomane ngesibindi, emva koko ke ukrola, ukrola ngamaqhekeza amakhulu, ubhaka imizuzu. 25-30 kwi-180 gr. Unokwenza okufanayo nange isinamoni , gubungela umaleko wenhlama ngebhotile ethambileyo, ufefe isinamoni, iswekile, roll, chop. Inketho ye-piquant kukuzaliswa kwebhotela ethambileyo, amayeza, igalikhi kunye netshizi.
3. I-pastry ye-puff iyiplastiki kakhulu, kulungele ukwenza iiflaskes kunye neebhasikiti zezinye izitya ezivela kuyo. Ndisebenzisa i-puff pastry yesicatshulwa; Idada etyiweyo kunye nenyama yenkomo kakuhle. Ewe, kwaye nje inyama enenhlama inencasa kakhulu.
Ukubhaka iziqwenga-iipayi, izinti (esimnandi ngamajikijolo okanye amandongomane, imbewu yeopoppy, ityuwa ngepaprikra, igalikhi, ipepile, itshizi), iilwimi, iisoseji enhlama.
Ukusuka kwi-pastry ye-puff ungapheka nayiphi na into ukusuka kwi-pizza ukuya kuma-pastry amnandi e-toppings. Ndikuthanda kakhulu ukupheka i-quartet, khachapuri, samsa. Iipies ezinamajikijolo ahlukeneyo, ubisi oluhlanjulweyo, ushizi we-cottage, jam.
Lungiselela ukukhukhumala, umtsalane kunye nomboniso wokuqala, iresiphi kule vidiyo:
Iresiphi yeKhachapuri: ilula kakhulu, ikhawuleza kwaye imnandi! Kuyo uya kufuna itshizi kunye nenhlama:
Intsapho yethu iyazithanda iimveliso ezimnandi ezivela kwivenkile ephungwayo.
Thobisa iibhendi ngokuzalisa ezahlukeneyo. Batshayelwe, kunambitheka kakhulu kwaye bayakhawuleza ukulungiselela. Sika inhlama ibe kwizikwere kwaye usasaze kwiphepha lokubhaka, ugcoba iqanda ngaphezulu. Beka ehovini de kuphekwe. Ukugcwalisa (ubisi olubisiweyo lwebhotolo, ijam, ijam, ukhilimu) lubekwe kwii-buns ezilungiselelwe ezenziwe.
Puff braids. Inhlama iqengqelwe kwizikwere, imiphetho yesikwere iyasikwa (embindini ungongeza iswekile kunye nesinamon) kwaye ilukiwe ngohlobo lwe-spikelet. Ukusuka ngasentla, zichaphazela iqanda kwaye libhake.
Yizame, incasa kakhulu.
Ndiyathanda ukusebenzisa inhlama enjalo yokwenza iib bun ezingaqhelekanga ngejam okanye amajikijolo. Ndipholisa inhlama kancinci, ndiyisika kwizikwere, ndiyikhuphe kancinci. Ndibeka izinto eziko. Ukuba ijam, yibeka nje. Ukuba ezi zijikijolo- zintsha okanye zithanjisiwe, zifafazeke ngeswekile. Kwaye ke ndibopha iikona ezimbini ezichaseneyo. Ukuphela kwayo, inhlama ifakwe kwi-yolk eqhotsiweyo kwaye ithunyelwe kwi-oven esele iyitshisiwe kangangemizuzu eyi-10-15. Kuvela into enjalo.
Esikhundleni sokuzaliswa kwe-berry, ungasebenzisa i-cottage cheese, echekezwe kunye noshukela. Esi sitya siyifanele kanye emva kokupheka, kuba inhlama ikhawuleza ikhawuleze ibe yomile.
1. Roulade ifakwe iklabishi, i-anyanisi, amaqanda.
2. Hlawula ngeentlanzi ezikotyiweyo ngeoyile egayiweyo kunye neqanda.
Iipies kunye neebhatata, i-anyanisi egayiweyo kunye nama-mushroom.
I-4.Vula ikhekhe ngesalmon enetyiwa, i-leek, i-cream kunye noshizi.
5. Okufanayo - kuphela endaweni yesalmon - isipinatshi okanye i-sorrel.
6. I-pie evulekileyo kunye ne-lingonberry.
Umyeni wam uhlala esenza le nto - imnandi kakhulu. Kuyinyani, ezinye zeembono zezam - ndiyingcali kwibhotile eyenziwe ekhaya.
Imibuzo ye-21 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,381.